Ị nwere ike igosi m ụfọdụ hacks iji mee ka m nweta ahịa Amazon ahịa?
E nwere ụfọdụ aghụghọ iji mee ka elu gị ahịa ngwaahịa ahịa Amazon. Ajụjụ a dịkwa mkpa ọbụna mgbe ọ bịara dị mkpa iji bulie ngwaahịa Amazon ọ bụla ngwa ngwa ka o kwere mee iji gbasaa ume ma kwụsị ịsọ asọ. Ndị a bụ ụfọdụ atụmatụ ị nwere ike ịnwale maka ịchọta uru dị ukwuu na ogo ngwaahịa ọhụrụ n'ebe ahụ.
Nweta igbe zoro ezo na Amazon
Inwe igbe ịzụta nwere ike ịbụ ihe kachasị egwu ka onye ọ bụla na-ere ahịa oge ọ bụla mara na Amazon. Ịghara ịsị na ọ bụ naanị ụzọ ị ga-esi na-arụ ọrụ azụmahịa na-adabaghị adaba, ma ọ bụrụ na ị naghị emepụta ma ọ bụ mepụta ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdọrọ ọtụtụ n'ime ahịa na ụlọ ahịa gị, ị ghaghị igosi gị n'elu ngwaahịa ngwaahịa ahụ. Ọ bụ ya mere ị nwere ike melite ngwaahịa ahịa Amazon gị site n'ilekwasị anya na ihe ndị dị mkpa ịzụta igbe metrics, dịka:
Ọnụahịa - o doro anya, nke a bụ ihe na-eme ka ị nwee asọmpi megide ibe ndị na-ere ákwà. Cheta na, n'agbanyeghị ọnụahịa na Amazon na ndabara na egosipụtara ọnụahịa nke mbupu, ụfọdụ onyinye nwere ike dị oke ọnụ ọnụ karịa ndị ọzọ - nanị n'ihi na ha na-abịa na ọnụahịa ego efu na-enweghị ụgwọ ọ bụla metụtara ya. Ma ntakịrị nlezianya nyochaa onyinye ahụ nwere ike mee ka ihe ndị ahụ doo anya.
Nwepụta mbupu - bụ ihe kachasị mkpa Amazon ahịa ahịa. Ọ na-agụnye setịpụ nke ọnụọgụ nke onye ọ bụla, ya na ọnụọgụ dị ukwuu n'ime ODR (Ụdị Ụgwọ Dere - kagbuo, nloghachi, ma ọ bụ ezipụ na-ezighị ezi, gụnyere nkwupụta ọjọọ ọ bụla sitere n'aka ndị zụrụ ya), na POP (Perfect Order Percentage - uru percent nke naanị ihe ịga nke ọma ndi na enyeghi ndi ozo aka).
Nke a bụ ụfọdụ ụzọ dị irè ị ga - esi were iji nweta igbe Buy na Amazon.
1. Nke mbụ, jide n'aka na ị ruru eru - ihe a bụ na ngwaahịa gị kwesịrị inwe ASIN kpọmkwem na nhazi ụfọdụ ị chọrọ banye na ya. Nakwa, lelee ma ị na-eme ya n'ụzọ kwekọrọ na njirimara Zụrụ Zụọ.
2. Nke abuo, ị nwere ike ịdọrọ ọnụahịa gị ntakịrị karịa - nyere gị na ị ruru eru, ọnụahịa na-aghọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nanị otu ihe na-achọpụta ọganihu azụmahịa nke onye ọ bụla onyinye gị. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ihe niile ị chọrọ bụ ịmara mkpado ọnụahịa nke onye na-asọ mpi, ma nye ha otu pasent - ma emechaa.
3. N'ikpeazụ, ịnweta akara ngosi oroma pụrụ iche na-egosi mmepụta site Amazon na ndepụta ndepụta nke FBA gị nwere ike ịmepụta ngwaahịa Amazon ahịa gị na ụfọdụ. N'ụzọ dị otú ahụ, a na-atụ aro ịbanye na ya site na onwe gị ma nweta ohere na Amazon Prime listings - nke a kpatara ya iji gbaa ndị na-ere ere ume ka ha jide na bandwagon wee malite inweta ụgwọ ọrụ ndị ọzọ Source .